Nhau - DZIMWE DZIDZIDZO YAKADZIDZWA IRONI T SLOTS CHIMBORO CHIMFUKO BEDS KWEVANHU VOKUDZIDZA
Yakagadzirirwa KUKUNDA SONI T MOTO ANOSIMBIRA PASI PAMBhedha MUBHUKU REAUSTRALIAN MUTENGI
Hebei Bocheng Co-chisikwa Kuyera Chishandiso Kugadzira Co, Ltd ichakupa iyo Cast iron pamusoro pemahwendefa ane mhando yepamusoro, yemakwikwi mitengo uye mushure mekutengesa sevhisi.
Fekitori yedu inoitawo dhizaini, kusimudzira uye kugadzira zvigadzirwa zvechinyakare uye inopa mhinduro dzechinangwa mune inoenderana mutsara wekugadzira.
Isu tinoitawo kugadzira kweOEM kune akawanda epamba uye ekunze mabrandi.
Zvishandiso uye Kugadzira:
(1) Izvo zvinhu zveedu peplate / tafura yakakandwa simbi HT200-300
(2) Kushanda pamusoro peukukutu ndeye HB170-240
(3) Low inaccuracy kukanganisa uye zvakanaka vachikuya nemishonga.
Simbi yesimbi pamusoro ndiro inoshandiswa zvakanyanya, inoshandiswa mukugadzira michina, kemikari, Hardware, Aerospace, peturu, kugadzira mota, zvishandiso uye mamwe maindasitiri.
1.cast yesimbi bvunzo ndiro: yainyanya kushandiswa kuyedza iyo workpiece kukanganisa kwechiyero.
2.the ndiro yegungano: yezvikamu zvakakwana zvechigadzirwa chechigadzirwa, kutumirwa. Simbi yesimbi T yakavezwa webbed angle angle inogona kuiswa papuratifomu kunatsiridza gungano kunyatso uye kugona.
3.cast simbi yakayambuka chikuva: inonyanyoshandiswa kune akasiyana mativi epafurati akayambuka uye matatu-mativi akayambuka, chikuva chaicho ibhenji ratetepa, Workpieces mune yavo yebasa nzvimbo inogona kuwanikwa yakakwira chaiyo.
4.cast yesimbi base chikuva: kunyanya kune hombe michina, kuiswa kweiyo workpiece kugadzirisa uye kuyera kuyambuka.
5.cast yesimbi yekugedza chikuva: iko kuyerwa kwekuyera ndiro kunyatso kukwirira zvakanyanya, unogona kushandisa imwe yepamusoro-chaiyo yekuona yekushandira, kana yepamusoro-chaiyo yekushandira yekugaya uye kupora.
Mushure mekutengesa Service.
Zvese zvigadzirwa zvichave zvanyatso kuvezwa mhando yakatariswa mune yekuchengetedza imba usati warongedza.
Tinogona kutora pamusoro pekumisikidza kana kuomesa zviitiko kana kuronga hurongwa.
Isu tinopa iyo yakapera chirongwa mushumo.Kusanganisira Chibvumirano, Dhirowa, Quotation Sheet, Proforma
Invoice, Tsananguro yehunyanzvi, Kugadzira Progress Kudzora Chirongwa, Bvunzo uye Kuongorora
Mishumo, B / L, Inishuwarenzi, Yekutengesa invoice, Kurongedza Chinyorwa, Chitupa cheKutanga.
Kubhadhara izwi: T / T, L / C, Paypal, etc.
Nguva yekuendesa: zvigadzirwa mune stock -7 mazuva. Yakasarudzika chigadzirwa-15-30 mazuva
Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kuti utaure nesu kana iwe uchifarirawo:
Post nguva: Jan-12-2021